Nhọrọ kacha mma nke akwụkwọ akụkọ
Nyocha akụkọ ihe mere eme
Akwụkwọ kacha mma 5 nke Matilde Asensi dere
Onye ode akwụkwọ kacha ere ere na Spain bụ Matilde Asensi. Olu ọhụrụ na ike dị ka nke Dolores Redondo Ha na-abịaru nso oghere nsọpụrụ nke onye edemede Alicante, mana ha ka nwere ogologo ụzọ iji ruo. N'ime ogologo ọrụ ya, ahia ya na ọnụ ọgụgụ ndị na-agụ ya ...
3 akwụkwọ Robert Graves kacha mma
N'ihi ịgụ akwụkwọ The Sixteen Trees of the Somme, nke Larss Mytting dere, a kpalitere m ikere oke Robert Graves na agha nke mere na mpaghara France nke Somme, ebe ihe karịrị otu nde ndị agha nwụrụ na nke nwe…
Akwụkwọ 3 kacha mma nke Javier Negrete
Iji ihe ọmụma nke eziokwu na -ede ihe na -eme ka ndị na -agụ ya nwee mmasị mgbe niile, dị ka ụdị akụkọ akụkọ mere eme, enyelarị ikike na ịdị n'otu n'okwu akụkọ. Ma ọ bụ na Javier Negrete, gụsịrị akwụkwọ na Classical Philology, na -eji ohere ya ...
3 akwụkwọ kacha mma nke Bernard Cornwell dere
Nwa mgbei nke nne na nna site na nwata, Bernard Cornwell nwere ike ịsị na ọ bụ ihe atụ nke onye edemede ji aka ya mee ihe. Agbanyeghị na ọ bara uru karịa ịtụle ịhụnanya. Eziokwu bụ na ọ ghọrọ onye edemede n'ihi mkpa ozugbo ọ kwagara United States, na -enyefe ọdịnihu ya aka ...
Akwụkwọ Hilary Mantel 3 kacha mma
Mgbe mmalite akwụkwọ akụkọ na-adịghị mma n'etiti ụdị dị iche iche dị ka akụkọ ifo akụkọ ihe mere eme na ụdị ihunanya dị ugbu a (ụdị akụkọ pink), Hilary Mantel abụrụlarị onye edemede nke akụkọ ihe mere eme. N'okpuru nche anwụ nke ụdị a, o nweela ike imeri ihe nrite abụọ na oge abụọ ...
Akwụkwọ 3 kacha mma nke Santiago Posteguillo
Eleghị anya onye edemede Spanish kacha nwee akụkọ akụkọ mere eme bụ Santiago Posteguillo. N'ime akwụkwọ ya anyị na -ahụ akụkọ akụkọ dị ọcha mana anyị nwekwara ike ịnụ ụtọ atụmatụ gafere akụkọ ihe mere eme iji banye n'ime akụkọ echiche ma ọ bụ nka ma ọ bụ akwụkwọ. Ihe mbu…
3 akwụkwọ kacha mma nke José Luis Corral dere
Mgbe onye ọkọ akụkọ ihe mere eme kpebiri ide akụkọ akụkọ ihe mere eme, arụmụka ahụ na -agbapụ ruo enweghị njedebe. Nke a bụ ihe gbasara José Luis Corral, onye edemede Aragonese nke raara onwe ya nye nke ukwuu na akụkọ ifo akụkọ ihe mere eme, na -agbanwe ya na mbipụta nke ezigbo ihe ọmụma dị ka ezigbo ọkà mmụta na mpaghara ya. Gburugburu…
Akwụkwọ kacha mma 3 nke Umberto Eco dere
Naanị onye ọkà mmụta semiologist na -anọgidesi ike nwere ike ide akwụkwọ akụkọ abụọ dị ka Pendulum Foucault ma ọ bụ Agwaetiti nke ụbọchị tupu ọ la n'iyi na mbọ ahụ. Umberto Eco maara nke ọma gbasara nkwukọrịta na akara na akụkọ ihe mere eme nke mmadụ, nke mere na ọ wụsara amamihe ebe niile na abụọ ndị a ...
Ndị nne na nna dị anya, nke Marina Jarre dere
E nwere oge mgbe Europe bụ ụwa na -adịghị mma ka amụrụ ya, ebe ụmụaka batara n'ime ụwa na agụụ na -agụghị, iwepụ, nkewa na ọbụna egwu nne na nna ha. Taa okwu a akwagala n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. Ajụjụ bụ iwere echiche ahụ ...
Peeji1 Peeji2 ... Peeji17 Ọzọ →